Usoro mmepe - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Kemgbe 1990 YALIS Design na-arụpụta ụzọ esi arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nke ya na China ebe usoro mmepụta niile na-ewere ọnọdụ. YALIS Design na-ebugharị ọnụ ụzọ dị elu na mba dị iche iche. Ọ na-agbasa echiche YALIS ma na-emepe ngwaahịa nke aka ya, na-agbaso usoro ahịa iji gboo mkpa ndị ahịa. Akụrụngwa nke oge a emebere na China wee mee ka ọkwá kachasị elu nke China ka ere ya na ụwa niile.
Kemgbe 1990, YALIS Design azụlitela ọwa ụzọ na-ekesa ngwaike mpaghara na Shangdong na mpaghara ndị gbara ya gburugburu na China.
Na 2008, akara YALIS guzobere. Anyị debere ngwaahịa ndị dị elu na ihe mgbaru ọsọ nke ngwaike ngwaike ụzọ.
Kemgbe afọ 2009, YALIS natara asambodo sistemụ njikwa njikwa ISO9001, asambodo SGS, asambodo TUV na asambodo EN.
Na 2014, dabere na ama ama Italy, YALIS malitere imepụta zinc alloy door handle in modern style.
Na 2015, YALIS malitere ịmalite ma zụlite otu R&D. YALIS gbakwunyere ejiri zinc alloy dịka akara ngwaahịa ọhụụ.
Na 2016, ejiri YALIS 10 emebere ụzọ ụzọ eji abanye n'ime ahịa wee nweta patent. YALIS tụlekwara ịzụlite usoro ọhụụ maka ịgbakọ na ịwekọ.
Na 2017, n'ihi ụzọ mbụ nke ụzọ eji eji ụzọ eme ihe nwere ekele maka n'ahịa ahụ, ya mere YALIS weputara ụzọ nke abụọ nke ụzọ eji eji ụzọ ọhụrụ abanye ahịa. Ka ọ dị ugbu a, YALIS mere nnwale ọhụrụ n'ọnụ ụzọ aka: YALIS gbalịrị ijikọta ntinye na imecha ụzọ dị iche iche n'ime aka ọnụ ụzọ.
Na 2018, ọnụ ụzọ ejiri na-egbu maramara nwa imecha, aka ụzọ akpụkpọ anụ, rosette ewepụghị na 5mm ọkpụrụkpụ na ụzọ ụzọ na-enweghị rosette, ndị a 4 crafts abịawo ahịa. N'otu oge ahụ, YALIS malitere ịgbasa akara ya na Europe.
Na 2019, YALIS mara mgbanwe na ahịa ahụ, ya mere, ọ malitere ihe ngwaike ngwaike maka nrụpụta ọnụ ụzọ, gụnyere slim windo ụzọ eji ụzọ ụzọ eme ihe, ụzọ ụzọ osisi, ụzọ ụzọ osisi aluminom na ụzọ ụzọ ime ụlọ ụmụaka.
Na 2020, iji melite ikike imepụta na ogo ngwaahịa, ụlọ ọrụ mmepụta YALIS ewebatala usoro njikwa ISO na ngwa nrụpụta dị iche iche akpaghị aka, dịka igwe na-agbazi akpaka. Kọmputa Computer Number (CNC) igwe, akpaka na-anwụ-mgbatị igwe, akpaka mbukota igwe na na.
Ka ga-aga n'ihu.